Oromia: Another massacre by Agazi in Hameressa refugee camp – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooOromia: Another massacre by Agazi in Hameressa refugee camp
Oromia: Another massacre by Agazi in Hameressa refugee camp
#OromoRevolution Guran. 11/2018 Magaalaan Finfinnee Hoomaa Waraana Wayyaaneen Muddama keessa Seente jirti. Qabsoon itti Fufa!!
Ummata mirga isaa karaa nagaatiin gaafatuuun isin hin dubbatinaa afaan qabadha taa’aa warri jedhee halkaniifi guyyaa lafa dhiitu Agaazima ummata irraallee dhoorguu hin dandeenne.
Ummanni mirga isaa tikfachuuf karaa danda’e hundaan qabsaa’uudha qaba.
Global Gumii Oromia Press Release on the Unabated Massacre in Oromia
Global Gumii Oromia Press Release on the Unabated Massacre in Oromia Global Gumii Oromia 6909…
Ethiopia army accused of deadly attack on IDP camp in Oromia February 12, 2018 (Africa…
Seife Nebelbal Radio, February 10, 2018 – Interview with Qeerroo Leader
1.	OPDO akka wajiraatii haressaa (reform) godhuu dandessii jedhanii amanuun walaaluumaa natii fakkaataa, hanqinaa bekkumessaa wajiraa (organization) fakkataa. OPDOn akka wajiraatii gindaa fi qanberaa jechu dha, Lemaa faan immoo qotiyoo gindaan fi qanbarii (wanjoo) iraatii fe’aamee jechuu dha kanaf jijiramaa fiduu, dubaa hiriraa jechuun dogogoraa fakkataa. Lemaan faa qanbraa OPDO jedhu jalaa off bassuu ykn qanbera OPDO jedhu cacabessu danda’uu qabuu, hojjaan duraa kana ta’uu qabaa. OPDOn motuumaa Oromias mittii. Oromon mottuumaa hin qabuu garuu qerroon motuumaa ta’uu danda’aa akka illaaleechaa kottii.
2.	Wa’ee ibessaa OPDO, OPDOn bakkaa murnii (class, medeb) hin jireettii wa’ee murnaa hassofeetii, bakkaa umaataa (Nation) rakkoo hin taneetii, akkaa rakkootii torebann gutuu irraatii hasa’aa battee. Kanaf OPDOn humenaa afaanfaajii dhaaf umaameetee dhaa.
3.	Wa’ee gabaa laganaa, off eganoo cimaan barebaachissaa dhaa, namoon bayeen hidhamuu danda’uu daraaraamuu danda’uu. Kanaf qophiin off iraa ittiisuu danda’uu qopha’uu wan qabuu natii fakkattaa akkaa illaaleechaa kootii.
4.	Namussaa, uguummaa namussaa qabaachuun garii dha, garuu bakka nammiin namussaa hin egeeneetii namussaa egaa jechuun wan garii natii hin fakkatuu, waraa namussaa hin egeeneetii namussaa godhadhaa juchuun garii fakkaataa. Yoo namussaa hin egeen imoo akkaa namussaa godhaataan godhuun mirigaa ummataa Oromotii. Kessaafi allaan warii namussaa hin egenee, kan akkaa TPLF, bassassuniff fi adabaa qabessissun diriqaamaa umaataa Oromo hundaatii. Umanii Oromo qabessoo itii jiruu gara Fincillaa Fonqolechaa Garbumaatii jirjiree, cassaa OPDO to’aan jalaa olechuu, wajiraa akka Bulenchissaa to’aanaa jalaa olechudhaan hoganansaa kenuun barebachissaa dha, cassaa offii kan ummaataa oromo tajaajillu umuun barebachissa dha akka illaaleechaa kotii.
Galaatooma jabadhaa, waqaayo issiin walliin ha ta’uu.